မြန်မာပြည်ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်း ဆရာ”ဝိကီ”(Wikipedia) ရဲ့အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြန်မာပြည်ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်း ဆရာ”ဝိကီ”(Wikipedia) ရဲ့အမြင်
မြန်မာပြည်ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်း ဆရာ”ဝိကီ”(Wikipedia) ရဲ့အမြင်
Posted by Kyaemon on Nov 25, 2011 in Business & Economics, Education, Money & Finance, Think Different |6comments
Burma Development Cambodian Economy CHINA FACTOR Wikipedia မြန်မာပြည်ဆင်းရဲရခြင်း
မြန်မာပြည်ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်း မှာတရုပ်ကြီးကြောင့် ဆိုပြီးစာရေးသူတဦးကမြင်တယ်၊
“တရုတ်ကြီးကို အတော်များများ ကနေ လုံးဝနီးပါး မှီခိုနေရတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ (မြန်မာ၊ လော၊ ကမ္ဘောဒီးယား) ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့…. ..တရုတ်ဩဇာသက်ရောက်မှု China factor ကိုသွားမြင်ရတယ်။
တရုတ်ကြီးကို မှီခိုလို့ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံပြပါဆို ပြစရာ တနိုင်ငံမှ မရှိဘူး။
ဗီယက်နမ်တောင် တရုတ်ကြီးနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ ပြန်ပေါင်းလိုက်တာ စီးပွားရေး တဟုတ်ထိုး တိုးတက်နေပါတယ်။
သူဌေးနဲ့ပေါင်းမှ လဘက်ရည် အလကားသောက်ခွင့်ရပါမယ်။ ကိုယ်လိုသူလိုတွေပဲ ပေါင်းရင် ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်စိုက်၊ ပိုဆိုတာ တရုတ်ကုလားလို့ ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးပြီး ငါ့ဖို့သမားဆိုရင်တော့ မစားရတဲ့အပြင်…..”
အမေရိကန်နဲ့ ပြန်ပေါင်း စီးပွားရေး တဟုတ်ထိုး တိုးတက်မယ်
…… ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအပြင် အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံများနဲ့ပါ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ပြီး ကုန်သွယ်စီးပွားရှာနိုင်ရင် တရုတ်ကြီးပြုသမျှ နုနေရတဲ့ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်
ကဲပညာရှိ သုခမိန် ဆရာ ဝီကီ(Wikipedia) ကဘယ်လိုမြင်သလဲ သွားခစားမေးမြန်းစုံစမ်းရအောင်
ကမ်ဗိုးဒီယား နဲ့ပတ်သက်လို့သူက အဲဒီလိုအဖြေပေးတယ်
Exports $6.491 billion (2010)
Export goodsclothing, timber, rubber, rice, fish, tobacco, footwear
Main export partners US 54.5%, Germany 7.7%, Canada 5.9%, UK 5.5%, Vietnam: 4.5% (2010)
Imports $6.005 billion (2010)
Import goods petroleum products, cigarettes, gold, construction materials, machinery, motor vehicles, pharmaceutical products
Main import partnersChina 22.6%, Vietnam 12.7%, Hong Kong 12.4%, Thailand 11.9%, South Korea 5.4%, Singapore 5.4% (2010)
Gross external debt4.338 billion (2010)
တင်ပို့ကုန် $ ၆.၄၉၁ ဘီလီယန် အနက် အနောက်နိုင်ငံသို့တင်ပို့တာက ၇၄% ဗီယက်နမ်၎.၅ %
တရုပ်ကြီး မရှိသလောက် ဖြစ်နေတာ
ဒါကို ထောက်ရင် ကမ္ဘောဒီးယား ကုန်သွယ်မှု ဟာ တရုပ်ကြီး ကိုဘဲ “လုံးဝနီးပါး မှီခိုနေရတဲ့ တိုင်းပြည်” လို့ခေါ်နိုင်မလား၊
“အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံများနဲ့ပါ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ပြီး ကုန်သွယ်စီးပွားရှာနိုင်ရင်” ဗီယက်နမ် လို “တဟုတ်ထိုး တိုးတက်မယ်”ဆိုလို့
စာရေးသူက သူများကို စွပ်စွဲခဲ့သလိုအနောက်နိုင်ငံတွေကများ ဈေးများနှိမ်သလား လို့ဘဲ
“တရုတ်ကြီးပြုသမျှ နုနေရတဲ့ဘဝမှ အစား” အမေရိကန်၊
” ဥရောပနိုင်ငံများ ကပြုသမျှ နုနေရတဲ့ဘဝမှ” လို့ဆိုနိုင်မလား
တရုပ်ကြီး ထံမှ တင်သွင်း တာက စုစုပေါင်းရဲ့ ၂၃% ဖြစ်ပြီး အခြား နိုင်ငံ အသီးသီး ထက်ကြီး တာကိုတွေ့ရ တယ်
သူပစ်စည်း က တခြားဒေသက ပစ်စည်း ထက် ပေါချောင်ကောင်း တာလို့ ဘဲပြောနိုင်တယ်
ဘယ်လိုပြောပြော သွင်းကုန်ဘက်မှာလဲ တရုပ်ကြီးကိုဘဲ လုံးဝ အားကိုးနေတယ်လို့မပြောနိုင်
(လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စက်ရုံတည်ဆောက်ရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု FDI ကိုသီးခြားလုပ်ပေးတာနဲ့မသက်ဆိုင်)
ကိုယ်ကဘဲ ဘီလူးရုပ်ဘဲ မြင်ချင်တာ ဖြစ်မနေဘူးလား၊ “ကိုယ်နဲ့နှိုင်းမရိုင်း” ဆိုတာလို
“သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်” မျှမျှတတ” ဖြစ်ရပ်မှန်အတိုင်း” ကြည့်တတ်ဘို့ဘဲမှုတ်လား
ဆရာ”ဝိကီ” (Wikipedia) တယောက်လုံးရှိရက်သားနဲ့ သူ့ကို မမြင်တာက အံ့ရော
မြန်မာပြည် ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်းကို သိပ်မရှင်းပါ။
မြန်မာပြည်ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်း CIA အမေရိကန်ထောက်လှမ်း ရေး အဖွဲ့ရဲ့အမြင်
တွင် အချို့ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျ၊ ပြည့်စုံချင်မှပြည့်စုံမှာ၊
မြန်မာပြည်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်း China factor – ကြောင်ကြီး |303- Hits|
ကိုလည်း ဘတ်ရှုနိုင်ရင် ပိုကောင်း ပါလိမ့်မယ်၊ ဘက်စုံသိရတာ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့အရသာ အသီးအပွင့် မဟုတ်လား ဗျား
“ ဗီယက်နမ်တောင် … အမေရိကန်နဲ့ ပြန်ပေါင်းလိုက်တာ စီးပွားရေး တဟုတ်ထိုး တိုးတက်နေပါတယ်။
…အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံများနဲ့ပါ … ကုန်သွယ်စီးပွားရှာနိုင်ရင် …နုနေရတဲ့ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။”
စာရေးသူတဦးက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လေလုံးထွားခဲ့ တယ်
(အနောက်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရင် “တဟုန်ထိုး” ချမ်းသာသွားမယ်လို့ပြောသူတွေ သတိပြုရန်
ငွေကြေး အခက်အခဲ ကိစ်စ အတွက် အနောက် နိုင်ငံများ နဲ့အမေရိကန်တို့က အမေရိကန်သမတအိမ်တော်မှာ အရေးတကြီး စည်းဝေးထိုင် ခေါင်းချင်းရိုက် နေရပြီ မှုတ်လား၊
အိမ်နီးနားချင်းတွေကို အထင်သေး ပုတ်ခတ်ပြီး၊ ငွေကြေးဒုက်ခရောက်နေကြတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့
ှကုန်သွယ်မှဘဲ သူဌေးဖြစ်မယ်၊ ဆင်းရဲဘဝမှလွတ်ကျွတ်သွားမယ် ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား)
Eurozone crisis: Debt fears loom at White House summit
US President Barack Obama is hosting European Union leaders inasummit that is likely to focus on continuing efforts to stem the EU debt crisis.
He met European Council President Herman Van Rompuy and European Commission President Jose Manuel Barroso at 11:45 EST (16:45 GMT).
A statement from each leader was expected after the meeting.
The White House summit – the first with since Mr Van Rompuy took office – comes amid new fears of recession.
In its new forecast, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) says the eurozone economy is contracting and argues the European Central Bank must take action.
The eurozone and UK could be enteringarecession, the OECD warned on Monday as it cut its global growth forecast.
The US administration has expressed concerns that the eurozone crisis could damage the US economy.
But world markets were up on Monday in response to reports ofaproposed fiscal union that would set binding limits on eurozone government borrowing.
Mr Obama has been in regular contact with German Chancellor Angela Merkel and French President Nicolas Sarkozy in recent weeks, but Monday’s summit affords another opportunity to press European leaders to come to an agreement and prevent further shocks to the world economy……
ယူရိုငွေကြေးပြသနာကြောင့် လူမှုရေးမငြိမ်မသက် ဆူပူမှုတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမေရိကန် စစ်ဗိုလ်ချုပ် Dempsey က သတိပေး
Gen Dempsey, who is chairman of the Joint Chiefs of Staff, told an event hosted by the Atlantic Council,aWashington think-tank: “The eurozone is at great risk.”
ဥရောပ နိုင်ငံများ မစည်းလုံး မညီညွတ် ကြလို့ Euro ယူရိုငွေစက်ကူကို သုံးစွဲဘို့ မက်မော စရာ စွဲဆောင်စရာ အင်အား လျော့နဲလာ
European Disunion: Euro’s Allure Dims in Eastern Europe – WSJ.com
Despite the downturn gripping much of the Continent, workers struggle to keep up with demand. “Frankly speaking, we haven’t even felt the crisis,” said Maciej Formanowicz, president of Fabryki Mebli Forte SA, as forklifts loadedashipment of television cabinets bound for Germany.
A critical reason for Forte’s strength: Poland doesn’t use the euro.
When turmoil enveloped the globe three years ago, Poland’s zloty declined against currencies seen as safer, including the euro. …